संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना- विचार - कान्तिपुर समाचार
संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना
मनमौजी तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान र विधिको शासनप्रतिको अपमान त हुँदै हो, संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै धोकाधडी पनि हो ।
असार २०, २०७८ खिमलाल देवकोटा
संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा अधिकांश सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ’ भन्ने कवितांशले भरिएका थिए ।
संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने नेपालीको आकांक्षा सात दशकपछि पूरा भएको थियो । तर त्यसको केही वर्षमै यो संविधानले पनि आरोह–अवरोह झेल्नुपर्‍यो, जसका कारकहरूबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
गणतन्त्रका योद्धा भए पराई
२०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा त्यसको दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिए पनि दुई–दुई पटक समय थप्दासमेत सफलता मिलेन । २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भयो, जनतामा ठूलो निराशा छायो, नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत हुने हो कि भन्ने त्रास व्याप्त भयो । धन्न, २०७० मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन सक्यो र उक्त संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको उद्घोष गरेको त्यो दिन वास्तवमै ऐतिहासिक थियो । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र तपस्याबाट निर्मित संविधानलाई सारा विश्वले स्वागत गर्दा पनि भारतले भने समर्थन गर्नु त कता हो कता, महाभूकम्पले थला परेको नेपाललाई उल्टै आहत हुने गरी छ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यति बेला नाकाबन्दी गराउन भारतलाई उक्साउने र संविधान जलाउनेहरू अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट सहयात्री छन्, संविधान र विधिको शासनका लागि मरिमेट्ने गणतन्त्रका योद्धा, नागरिक समाजका सदस्यहरू भने पराई भएका छन् ।
सरकारका तहहरूबीच प्रतिस्पर्धा
संविधानको उपलब्धिस्वरूप एकात्मक राज्यव्यवस्थाको पुनःसंरचना भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह अस्तित्वमा छन् । कठिन परिस्थितिका बाबजुद प्रदेश र स्थानीय तहले देखिने र अनुभूति हुने कामहरू गरेका छन् । जनताले घरदैलोमा सरकार पाएका छन् । समस्याहरूको स्थानीयकरण भएको छ ।
बसाइँसराइमा कमी आएको छ । द्वन्द्वलगायतका कारण थातथलो छाडेका कति मानिस गाउँ फर्केका छन् । पालिकाहरू, प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । कैयौं पालिकाले प्रदेशको भन्दा पनि राम्रो काम गरेका छन् । संघीय सरकारको भन्दा पनि राम्रो कामको सुरुआत गर्ने प्रदेशहरू पनि छन् । संघीयताले सरकारका तहहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा सृजना गराएको छ । तर दुर्भाग्य, प्रतिनिधिसभाको पटक–पटकको विघटनका कारण संघीय राजनीति गिजोलिएको छ । प्रदेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ ।
राष्ट्रिय सभालाई बेवास्ता
संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेको छ, जसको प्रयोग संसद्बाट हुन्छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी र संसद् जनताप्रति जवाफदेह हुनु संसदीय व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्त हो । तर प्रधानमन्त्री ओली संसद्बाट भागीभागी हिँडेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई चोरबाटोबाट नियुक्ति गर्ने, सार्वभौम संसद्का समितिहरूले पास गरेका विधेयक संसद्मा लगी अनुमोदन गर्नुको सट्टा अध्यादेशबाट शासन चलाउने काम भएको छ ।
संसद्को समितिबाट पास भएको विधेयक दर्ता गर्नुको सट्टा अदालतले कार्यान्वयन नगर्नू भनेर आदेश दिएका अध्यादेशसमेत सरकारले जबरजस्ती राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । सरकार संसद्प्रति साँच्चिकै उत्तरदायी थियो भने अत्यावश्यक कानुन र बजेट राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने थियो, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय सभा/समितिबाट अनुमोदन गराउँथ्यो । असल अभ्यासका लागि संविधान र कानुन बाधक हुँदैनन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन सामान्य अवस्थामा पनि हुन सक्छ । त्यस्तो समयमा बजेट पेस/छलफलका लागि राष्ट्रिय सभा उपयुक्त थलो हो भन्ने नजिर पनि बस्थ्यो ।
पदत्याग नगरेर संसद्को अपमान
राजनीतिक स्थायित्व संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षसम्म फेरि ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने राजनीतिक स्थिरतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्था हो । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई बिनारोकटोक काम गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सांसदको विश्वास जितेर काम गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छैन भने संविधानबमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने सांसदको विशेषाधिकार हो ।
तर, संविधान लेख्ने समयमा चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई लत्याएर संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने अनि अहिले आएर ‘मेराविरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन थाले अनि संसद् विघटन गरें’ भन्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलामा उल्लेख भएजस्तै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा (फैसलाको बुँदा २ को अन्तिम अनुच्छेद) संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । संसद्ले विश्वास नगरे पदत्याग गर्नुपर्छ । जस्तो, बेलायतमा ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन नगर्दा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले तुरुन्त राजीनामा गरेकी थिइन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ
संविधानले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत ३१ वटा विषयसँग सम्बन्धित मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जस्तो, शिक्षाकै सम्बन्धमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भन्ने छ । यसै गरी स्वास्थ्यका सम्बन्धमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने छ ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित यी अधिकारहरू कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ गरेको छ । तीन वर्षभित्रमा कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिए पनि आधाभन्दा बढी मौलिक हकका कानुनहरू बनेका छैनन् । अन्य मौलिक हकका विषय छाडौं, शिक्षा र स्वास्थ्यकै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि ठूलो परिवर्तन हुन्छ । तर सरकार मेडिकल माफिया लगायतहरूको पृष्ठपोषणमै संलग्न छ । स्वास्थ्यसेवाप्रतिको सरकारको गम्भीर लापरबाहीको एउटा उदाहरण कोभिड खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो ।
समावेशी लोकतन्त्र निमिट्यान्न
लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने अभिप्राय संविधानको छ । यस क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । जस्तो, स्थानीय तहमा हाल निर्वाचित करिब ४० हजार जनप्रतिनिधिमा ४१ प्रतिशत महिला छन्, तीमध्ये करिब २० प्रतिशत दलित हुन् । प्रदेश र संघीय संसद्मा पनि समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व छ । समानुपातिक विधिअनुसारको प्रतिनिधित्वका लागि आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत आदि हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासमेत छ ।
दूरदराज र सीमान्तकृत नागरिक लगायतको ढुकढुकी सार्वभौम संसद्ले बोल्ने गरेको छ । संसद्को बैठक निरन्तर र नियमित हुने हो भने सीमान्तकृत लगायतको आवाज मुखरित हुन पाउँछ । तर दुर्भाग्य, तिनको आवाजलाई थुन्ने काम भएको छ । दुई–दुईचोटि सार्वभौम संसद्/प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट संविधान घाइते भएको छ । संविधान कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खस–आर्यलगायतको अधिकार कमजोर हुनु होÙ समावेशी लोकतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्नु हो ।
संविधानले भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर संविधान कार्यान्वयनकर्ताहरू नै संविधानको मूलभूत भावना भत्काउन तल्लीन छन् । उदाहरणका लागि, शिक्षामन्त्री जातीय विद्वेष फैलाउने काममा लागे । भर्खरै बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्रीले कोभिडसम्बन्धी सामाजिक दूरीको नियम तोडेपछि राजीनामा गर्नुपर्‍यो । हामीकहाँ त मठमन्दिरमा गजुर राख्नेदेखि धरहराको उद्घाटनसम्ममा तामझामका साथ प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुन्छन्, अन्य मन्त्री र निकायको कुरा त के गर्नु !
संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धकका अलावा संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा अंगीकार गरेको छ । तर राष्ट्रपतिका व्यवहार संविधानअनुकूल नहुँदा नागरिक समाज, राजनीतिक दलसहित अधिकांश वर्ग र क्षेत्र आक्रोशित छन् । उनको निष्पक्षतामा समेत धेरैले शंका गरेका छन् ।
जस्तो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा गरिएका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको नियुक्ति नगर्नु र उनलाई मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्नसमेत नदिनु तर संसद्बाट वैधता गुमाएको र चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहयोग गर्नु । राजनीतिक दल विभाजन, संवैधानिक नियुक्ति, नागरिकताजस्ता विवादास्पद अध्यादेशहरू बिनासोचविचार सदर गर्नु । प्रतिनिधिसभा बैठकको आह्वानका लागि ८३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका भीम रावल, पम्फा भुसाललगायतका निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा छ घण्टा बस्दा पनि चिठी दर्ता गर्न नदिनु तर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई रातारात सदर गर्नु । दिउँसो छ घण्टा बस्दा पनि पत्र दर्ता नगर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले राति एघार बजे पठाएको (हुलाकको टिकटसम्म नटाँसिएको) पत्र भने दर्ता गर्नु र त्यसको वैधताको लेखाजोखाबिनै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आधार मान्नु ।
यसै गरी, शपथ गराउँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ नगराई शपथग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश सदर गर्नु । संसदीय व्यवस्थामा बजेट भाषण संसद्बाहेक अन्यत्र कतै गर्नर् नहुने सत्य बुझीबुझी बजेट प्रस्तुत गर्न एक हप्ता मात्रै रहेको अवस्थामा पनि संसद् विघटन गर्नु, बजेट भाषणसम्बन्धी अध्यादेश सदर गर्नु । स्मरणीय छ, सन् १९९० मा भारतमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्दा राष्ट्रपति आर वेंकटरमनले रोकेका थिए ।
संसद्बाट विश्वासको मत गुमेको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर अर्को सरकार नहुन्जेल कामचलाउ सरकार भन्नु/गराउनुपर्नेमा त्यसो नगर्नु, प्रधानमंत्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको एउटा धारा पूर्ण अभ्यासमा नआउँदै (विश्वासको मत लिने, विश्वास प्राप्त नगरेमा राजीनामा लिने र अर्को सरकारको आह्वान गर्ने) अर्को धारा क्रियाशील गराउनु, कोभिडका कारण मुलुक नै ठप्प (स्थल तथा हवाई यातायात नचलेको, सांसदहरू जिल्ला–जिल्ला गएको) भएको स्थितिमा सरकारका लागि दाबी पेस गर्न सांसदहरूलाई जम्मा एक्काइस घण्टाको समय दिनु, १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सबै उपस्थित हुँदा पनि कपटपूर्ण तरिकाले संसद् विघटन गर्नु, राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो भन्ने हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिनु, महान्यायाधिवक्ता र सरकार पक्षका वकिलहरू अदालतमा त्यसरी नै प्रस्तुत हुनु आदि पनि राष्ट्रपतिको बदनियतका दृष्टान्त हुन् ।
संसदीय व्यवस्थाप्रति धोकाधडी
सबै राजनीतिक दललाई समान व्यवहार गर्ने, सरकार निर्माण र सञ्चालन लगायतमा दलहरूबीच दरार पैदा भएमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, संविधानलाई कोही र कसैबाट अलिकति पनि चोट पुर्‍याउन नदिने, कुनै व्यक्ति/पार्टीको पक्षपोषणभन्दा पनि समग्र मुलुकको हितमा लागिपर्नेजस्ता कर्तव्यहरूमा राष्ट्रपति सुरुदेखि नै चुकेको पाइन्छ, उनका व्यवहारहरू पनि संविधान र मुलुकको दीर्घकालीन हितसँग पटक्कै मेल खाँदैनन् ।
राष्ट्रपति कार्यकारीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार अंग हो । कार्यकारी संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । दलको अनुशासन/वैधता, ह्वीप आदिको परीक्षण हुने स्थल संसद् हो । मनमौजी तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान र विधिको शासनप्रतिको अपमान त हुँदै हो, संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै धोकाधडी पनि हो । सरकार परिवर्तन भए पनि संसद् बचाउनेतर्फ राष्ट्रपतिको ध्यान जानुपर्थ्यो ।
अन्तमा, धारा ७६(३) को नकआउट चरणबाटै असफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः धारा ७६(५) दाबी गर्न मिल्दैन । फेरि, दाबी पेस गर्ने दिनमै ‘मैले बहुमत पुर्‍याउन सक्तिनँ, पदमा बस्नै मन छैन, थाकिसकें, अर्को सरकारका लागि बाटो सहज गरिदिएँ’ भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै हात उठाएका थिए । यस्तो स्थितिमा, सरकार गठनको दाबी पेस गरेका माननीय देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर परीक्षणका लागि राष्ट्रपतिले संसद्मा पठाउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी/प्रमाण पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेपछि मुद्दा परेको हो । यस स्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आदेश दिन जरुरी छ । यहाँ विषय देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिको हैन, संविधानको सर्वोच्चता जगेर्नाको हो ।
प्रकाशित : असार २०, २०७८ ०९:१०